🥇 ▷ Fiiri kontoroolladaan cajiibka ah ee loo yaqaan 'Switch' oo leh naqshadaha Zelda iyo Pokémon ✅
Fiiri kontoroolladaan cajiibka ah ee loo yaqaan ‘Switch’ oo leh naqshadaha Zelda iyo Pokémon
Haddii aad raadineyso koontarool ka ah Nintendo Switch, miyaad tahay aruuriyaha kontaroolada mise miyaad uun taageere u tahay Halyeeyga Zelda ama Pokemon, ka dib warkani wuxuu kugu dhici doonaa luul, sababtoo ah taxane cusub oo kontaroolo ah oo loogu talagalay Nintendo Switch Iyada oo la adeegsanayo naqshadahaas 2-aad ee franchiska ah.
Sida taxanaha ah Pokemon, PowerA waxay daaha ka qaadday dhowr naqshadood oo Pikachu uu yahay horjooggayaasha. Mid ka mid ah waxaad ku arki kartaa qaab macdan ah oo qaab dhismeedka abuurka leh uu u taagan yahay. Mid kale qaab dhismeedka jaalaha ayaa lagu arkaa, halka inbadan oo ka mid ahna uu la wadaagayo nashqadda halyeeyga hidaha, Mewtwo. Intaa waxaa u dheer, shirkadda waxay soo bandhigtay kontaroolada Poké Ball, Barta Weyn iyo Ultra Ball.
Ugu dambeyntiina, xakameyn cusub ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay taxanaha Halyeeyga Zelda. Sidaad ka arki karto hoosta, iyadu waa amiirad leh qaabeynta Neefta Neefta midka muujiya xakamaynta, kaas oo satin buluug ah u taagan.
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah, waa inaad ogaataa in mid walbaa lagu qiimeeyaa $ 49.99 USD iyo inay heystaan ​​ruqsadda rasmiga ah ee Nintendo. Waxaa la filayaa inay diyaar noqdaan Sebtember. Waad u kala saari kartaa boggan.
Koontarooladaani waa wireless mana aha habka kaliya ee dib loogu soo celiyo iyada oo loo marayo baytariyada AA. Si ka duwan kontarooladii hore ee Nintendo, kuwa PowerA waxay leeyihiin nal koronto xagga hoose ee u adeega sidii tilmaame ciyaartooy, waxay sidoo kale leedahay tuseelo batteriga hooseeya dusha gadaalna waxaa ku yaal 2 batoon oo dheeri ah oo la habeyn karo. Koontarooladaan ma taageerayaan HD Rumble mana akhrin karaan tirooyinka amiibo.
Waxaan kaaga tageynaa hoosta kontrooladan cusub hoosta.
Nintendo New Switch Power Controllers PowerA
Maxaad u aragtaa naqshadaha? Maxaa dareenkaaga qabtay? Ma xiisaynaysaa inaad iibsato wax? Noosheeg faallooyinka.
Warar la xiriira, isla isla shirkadda mas’uulka ka ah koontarooladaan ayaa ku dhawaaqay maalmo ka hor kontorool loogu talagalay ‘Switch’ oo leh nashqad xasaasi ah Spyro the Dragon. Waxaad ka akhriyi kartaa warar dheeraad ah oo ku saabsan Nintendo Switch Haddii aad booqato boggan.
Nala soo socodsii, LEVEL UP.